Mary Sharpe ao amin'ny Press Pre-TRF - The Reward Reward
Home Mary Sharpe ao amin'ny Press Pre-TRF
Ny hevitr'i Mary Sharpe momba ny karazana fototra hanaovana ny fikarohana ara-tsiansa momba ny fitiavana ara-nofo dia azon'ny besinimaro naseho voalohany tamin'ny 2006. Tamin'io taona io i Mary dia nanolotra taratasy momba ny “Firaisana ara-nofo sy fiankinan-doha” tamin'ny fihaonambe fahatelo momba ny Psikolojia Positifika Iraisampirenena tany Portugal. Nanomboka nahazo tanjaka ny internet ary hitan'ireo mpianatra fa sarotra kokoa ny manohitra ny fanelingelenana. Ny streaming sary vetaveta dia nanjary azo 'nipaipaika' nanomboka tamin'ny 2007. Mary sy ny mpiara-miasa aminy dia nanomboka nanara-maso ny fivoarana sy ny olana mifandraika amin'ny fahasalamana, ny fifandraisana ary ny heloka bevava nandritra ny taona vitsivitsy. Mazava fa ny sarambabem-bahoaka, ny influencer ary ny mpanapa-kevitra dia mila fidirana mora amin'ny siansa izay nanomboka nipoitra momba ny fiantraikan'ny internet amin'ny fitondran-tenantsika sy ny tanjon'ny fiainantsika.
Mary Sharpe dia nanomboka niasa tamin'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia momba ny fifankatiavan'io fitiavana io taona maromaro talohan'ny nanorenana ny fankasitrahana Scottish Reward.
Amin'ity pejy ity dia mikaroka ao amin'ny tahirin-kevitra isika mba hanomezana fanazavana momba ny fisainana tany am-boalohany izay nitarika an'i Mary ny Fampandrosoana Foundation.
Ho an'ireo volana manaraka, hampidirintsika am-pahazotoana kokoa ny fampisehoana ny dia ataontsika.
Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Maria, jereo ny biography Eto.
Ny ady amin'ny fankahalana sy ny fiankinan-doha 'tsy maintsy manomboka any am-pianarana
Lahatsoratra nataon'i Hamish Macdonell, 11 Jona 2011.
Ny sakelika kambana momba ny sekta sy ny fiankinan-doha dia mifandray akaiky ary tokony hazavaina amin'ny zaza mbola folo taona izy, araka ny voalazan'ny manampahaizana iray momba ny fifanoherana.
Ny minisitra dia nanome fiarahabana tamim-pitandremana ny antso, avy amin'i Mary Sharpe, mpisolovava iraisampirenena, ho ampianarina momba ny loza ateraky ny sekta, ary koa ny loza ateraky ny fisotroan-toaka sy ny zava-mahadomelina. Mino izy roa fa mifandray akaiky.
Ramatoa Sharpe dia niverina taty aoriana tany Skotlandia rehefa avy nandalina momba ny fanodikodinana ny tanora Silamo ho an'i Nato. Tiany ny hametraka ivotoerana iray hamahana olana amin'ny Edinburgh izay antenainy fa ho afaka hanampy amin'ny ady amin'ny sekta.
Mino izy fa ny sectarianism any Skotlandia dia mifamatotra amin'ny Ny olan'ny firenena amin'ny fiankinan-doha - indrindra fa amin'ny alikaola - ary miaiky izy fa tsy maintsy ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny fiankinan-doha sy ny tetezamita raha toa ka lasa firenena mandefitra i Skotlandia.
Ny mpitondra tenin'ny minisitra voalohany, izay hamoaka ny volavolan-dalàna iray hiatrehana ny sekta faobe amin'ny herinandro ho avy, dia nilaza fa i Ms Sharpe dia toa be dia be ny nanolotra ilay adihevitra. "Tena tianay ny haka an'io lavitra io ary ho hitantsika izay holazainy," hoy izy.
Alex Salmond dia nanao ny ady atao amin'ny sektarianisma ho laharam-pahamehana ho an'ny mpitantana vaovao ary ny sombiny voalohany amin'ny lalàm-panorenana dia ny volavolan-dalàna manohitra ny sekta, izay tokony hapetraka alohan'ny parlemanta amin'ity herinandro ity.
Ny volavolan-dalàna dia tokony hampitombo ny halavam-panjakàna farany indrindra noho ny heloka bevava fankahalana sekta manomboka enim-bolana ka hatramin'ny dimy taona, manameloka ny lahatsoratra an-tserasera momba ny fankahalana ara-pivavahana sy ny famoahana lalàna momba ny sekta ao amin'ny lalao baolina kitra.
Nivadika ny sektarianisma Andriamatoa Salmond taorian'ny fihanaky ny korontana sy ny manodidina ny Old Firm tamin'ny vanim-potoana lasa ary taorian'ny baomba niahiahy no nalefa tany amin'i Neil Lennon, tompon'andraikitra Celtic, ary mpanohana roa avo lenta amin'ny fikambanana.
Ny minisitry ny praiminisitra dia nampifandray ny olan'ny Skotlandy amin'ny alikaola ny sekta tamin'ny alalàn'ny sekta, rehefa nametraka ny laharam-pahamehan'ny governemanta vaovao izy tany amin'ny Parlemanta Scottish tamin'ny volana lasa. Hoy Andriamatoa Salmond: "Mandehandeha an-tanety ny sektaarianisme, farafaharatsiny amina ampahany, miaraka amin'ny fandrika iray hafa momba ny fiarovana sy ny fahasambarantsika - ny kolontsaina booze."
Nilaza i Ms Sharpe fa faly izy satria nahafantatra ny maha zava-dehibe ny fifandraisan'ny fiankinan-doha sy ny sekta ao amin'ny fiezahana hamahana ny olana ny Andriamatoa Salpe ary nilaza izy fa manantena izy fa ny fifidianana ny fitantanana SNP vaovao dia hanome fotoana hahalasa kokoa ity asa ity. . "Mampientanentana ahy ny fiovan'ny toetr'andro any Skotlandia ary ny fahavononako izao dia ho an'ny firenena hiatrika ireo demoniany," hoy izy.
Ramatoa Sharpe dia nilaza fa nanana olana momba ny fiankinan-doha amin'ny alikaola, nikotina, pôrnôgrafia amin'ny Internet, zava-mahadomelina, filokana ary sakafo junk - i Skotlandy avokoa, izay rehetra nanantitrantitra azy, dia nanampy ny nanosika ny firenena ho eo an-tampon'ny latabatra liga eran-tany noho ny fahasalamana, ny fahantrana ary matavy loatra. “Manana olana manokana i Skotlandia. Miaina amin'ny kolontsaina misy poizina izahay, ”hoy izy.
Nampiany ihany koa fa ny hany fototry ny olana naterak'ireo olana ireo dia ny fanovana ny fandaharam-pianarana any an-tsekoly sy ny fampianarana ny ankizy momba ny fiankinan-doha sy ny sekta maha-folo taona. “Mila miditra any an-tsekoly isika.
"Tokony hampianatra ireo mpampianatra izahay mba hampahafantarany ny ankizy ny zava-mitranga ary afaka mitaona ny ray aman-dreniny izy ireo," hoy izy.
Nanampy izy hoe: “Nobeazina tany Andrefana any Skotlandy aho. Hitako izany rehefa nihalehibe aho ary mbola manodidina izany. ”
Nilaza Andriamatoa Sharpe fa na dia ny herisetra an-trano aza dia miakatra taorian'ny lalao Old Firm, ny sektaireziana no tsy antony no antony; fa toa fisehoan'ireo olana ara-tsosialy hafa ihany izany, anisan'izany ny alikaola. Ary nampiany izy hoe: “Ny fanamby ho an'ireo mpanamboatra pôlitika dia tsy ny fahazoana ny fo sy ny sain'ny tanora fa ny hamonjy azy ireo. Izany dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny fanabeazana. ”